Florent Manaudou သည်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Pernille Blume ကားအဘယ်သူနည်း။ - Teles Relay
Florent Manaudou သည်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Pernille Blume ကားအဘယ်သူနည်း။
တော်ဝင်ထိတ်လန့်မှု - Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီတို့အနိုင်ရ ...
Atherton, California နှင့် Scarsdale, New York, ၏ပထမ ဦး ဆုံးစာရင်း ...
ယူစရာနှလုံးမရှိတော့ပါ။ တင်းနစ်ကစားသမားAlizé Lim နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးနောက် Florent Manaudou ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဒိန်းမတ်ရေကူး Pernille Blume ၏လက်များဖြင့်တွေ့ရှိရပုံရသည်။ Instagram တွင် အသက် ၂၉ နှစ်ရှိအားကစားသမားသည် Valentine's Day ကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အသစ်နှင့်အတူဓာတ်ပုံများဝေမျှရန်အခွင့်ကောင်းယူခဲ့သည်။ သေချာသည်မှာ၊ စုံတွဲသည်အလွန်ချစ်ကြပုံရသည်။ နော်ဝေဘာသာဖြင့် Florent Manaudou ကရိုးရှင်းစွာရေးသားခဲ့သည် - « ငါ့ဆီ။ သူမအနေဖြင့်ထိုမိန်းမငယ်သည်ဇနီးမောင်နှံ၏ Polaroids အများအပြားကိုဖော်ထုတ်သည့်ဓာတ်ပုံကိုသူမ၏ပုံပြင်တွင်မျှဝေခဲ့သည်။
အသက် ၂၅ နှစ်တွင် Pernille Blume သည်ဒိန်းမတ်ရေကူးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ရီယိုဒီဂျနေရိုရှိရီယိုဒီဂျနေးရိုးရှိအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွင်မီတာ ၅၀ အပြေးပြိုင်ပွဲ၌အိုလံပစ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးသူမသည်လည်းတိုတောင်းသောကာလ၌ထပ်ဆင့်လွှင့်သူများတွင်ကမ္ဘာ့အဆင့်သုံးခုထက်မနည်းသောသူများလည်းရှိသည်။ 50 ဇန်နဝါရီလအကုန်တွင်မိန်းမငယ်သည်ဘယ်ဘက်လက်၌ထပ်တလဲလဲနာကျင်ကိုက်ခဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်စဉ်မွေးရာပါနှလုံးချွတ်ယွင်းမှုကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Instagram ပေါ်မှလူပေါင်း ၁၀၈၀၀၀ ၏နောက်တွင် Pernille Blume သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဓာတ်ပုံများစွာဝေမျှသည်။ ကြိုက်တယ် Florent Manaudouသူမတိုကျိုအိုလံပစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေသည်
Florent Manaudou (@florentmanaudou) မျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု on ဖေဖော်ဝါရီ 14, 2020 မှာ 10: 49am PST
Florent Manaudou ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုပြန်သွားပါ
သူ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအကြောင်းကိုသတိရှိရှိအစား ရေကူးရဲ့ညီလေး Laure Manaudou အားကစားအမျိုးသမီးများအတွက်အားနည်းချက်ရှိပုံရသည်။ အမှန်မှာသူသည်မြင်းစီးသူရဲ၏အဖော်ဖြစ်သည် Fanny Skalli သုံးနှစ်တာ၊ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာကနေ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာအထိ။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာမြင့်စွာကျော်ကြားပြီးနောက်၊ ၂၉ နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးသည်မော်ဒယ်လ်ကိုသွားခဲ့သည်။ ပယင်း Baker, တင်းနစ်ကစားသမားနှင့်အတူအချစ်ဇာတ်လမ်းမစတင်မီ Alizé Lim. ယနေ့အားကစားသမားသည်သူနှင့်အလွန်ချစ်ရပုံရသည့်သူ၏အဖော်အသစ် Pernille Blume နှင့်အတူပျော်ရွှင်စွာရေကူးနေသည်! ထိုမိန်းမငယ်သည်သူ၏သားသမီးများ၏အမေဖြစ်မည်လော။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Florent Manaudou မှစာရေးဆရာဖြစ်လိုသောဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ခဲ့သည် Tele-Loisirs : « ငါပြီးသားထိုမိန်းမအဘို့အအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ... ဒါပေမယ့်ထိုသို့ပြုသည့်အခါဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်မှာတူမ (၂) ယောက်နဲ့တူလေးရှိပြီးသားပါ။ ငါ၌ကလေးတယောက်ရှိလိမ့်မည်နေ့ရက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။«
Tele RELAY တစ်ခု 22830 ရေးသားချက်များ0မှတ်ချက်များ
တော်ဝင်ထိတ်လန့်မှု - Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီတို့သည်တားမြစ်ချက်ကိုအနိုင်ရရှိနိုင်သည်
Atherton, California နှင့် Scarsdale, New York, အများဆုံးစာရင်းတွင် ...
အစ္စရေးကိုထောက်ခံသူတွေကCéline Dion နဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။